Halkee laga daawan karaa isboortiga inta lagu guda jiro xilli ciyaareedka 2021-2022? | Wararka Gadget
Xagee laga daawan karaa isboortiga xilli ciyaareedkan?
Sebtembar waxay la mid tahay ku soo noqoshada caadadii, xitaa inta badan isboortiga. Tartamada isboortiga sida caadiga ah waxay bilaabaan xilli ciyaareedkooda u dhigma ama ku sii wadaan. Markaa si aanad midna u seegin, ka Wararka Gadget waxaan kuu sheegi doonaa meesha aad ka arki karto tartamada isboortiga ee ugu waaweyn xilli ciyaareedka 2021/22.
Caadiyan waxaad bilawdaa daawashada kubbadda cagta labadii toddobaad ee u dambaysay Ogosto. Waxaa jiray hal mar oo kaliya oo ka dhigtay inay u dhaqaaqdo taariikhda jadwalka taariikhda waxayna ahayd sanadkii hore COVID. Xilligan wali wuxuu leeyahay haraaga masiibada laakiin ilaa xad. Horumarka wanaagsan ayaa u oggolaan doona in dadweynaha lagu soo celiyo garoomada, inkastoo haa, hadda, oo leh awood xaddidan.
Markaa haddii aad ka mid tahay kuwa aan iibsan tigidhka, si fudud ayaad u nasan kartaa maxaa yeelay waxaad sii wadi doontaa ikhtiyaarka ah inaad ka daawato telefishanka LaLiga dhammaan qiimayaashan naloo sheegay Wareega. Sannadkan isla'eggii sannadkii hore ayaa soo noqnoqday. Movistar iyo Orange waa hawl -wadeennada keliya ee aad ku daawan karto kubbadda cagta baakadaha isku -dhafan, Heerarka Fusion iyo Love, siday u kala horreeyaan.
Marka laga hadlayo kubbadda kolaygaWaxay ku xirnaan doontaa heerka tartanka. Haddii ay tahay a tartanka yurub sida Euroleague, Champions League Basketball ama Eurocup, waad arki kartaa iyada oo loo marayo DAZN; halka Horyaalka Endesa, Movistar, yaa leh xuquuqda baahinta horyaalkan.
Ka warran isboortiga kale?
Gawaarida, tartamada boqoradda waa Formula 1 iyo MotoGP. In kasta oo horyaalladaas ay ka harsan yihiin bilo yar, haddana waxaad ka faa'iideysan kartaa jugtii ugu dambeysay. Dhab ahaantii, haddii aad si sax ah u raacdo, waad awoodi kartaa arag kala bar inta ka hadhay xilli -ciyaareedka gabi ahaanba bilaash. Sababta ayaa ah in DAZN ay heshay xuquuqda baahinta illaa 2022 waxayna leedahay muddo tijaabo oo bilaash ah oo ah hal bil. Oo, waxay kuxirantahay waxaad doorbideyso, waxaad fursad u leedahay inaad iska qorto madal bil kasta ama sanad walba.
Sidoo kale, Movistar wuxuu heshiis la gaaray DAZN, sidaa darteed waxaad sidoo kale ku arki kartaa waxa ku jira mashiinka iyada oo loo marayo wadaha buluugga ah. Waxay ku jirtaa xirmada TV -ga Motoorka, oo lagu daray qiimaha laba qiime Fusion (Fusion Plus iyo Fusion Total Plus 4 khad). Inta kale ee qiimayaasha Fusion, waa inaad bixisaa qarashka baakadda oo ka sarreeya.
Baaskiilku wuxuu hadda si xawli ah ugu socdaa Tartanka Yurub ee ka socda magaalada Trento ee Talyaaniga. Haddaba haddii aad tahay qof jecel isboortigan, waxaad daawan kartaa dhammaan tartamada baaskiilka ilaa DAZN. Madalku wuxuu leeyahay labada kanaal ee Eurosport (Eurosport 1 iyo Eurosport 2), oo leh xuquuqda baahinta dhammaan baaskiilka. Dhab ahaantii, the Kanaalka Eurosport 1 wuxuu sidoo kale ku dhex jiraa shirkado sida Orange, Vodafone ama Virgin Telco.
Waxa kale oo jira suurtogalnimada arag baaskiil wadista wadayaasha sida Yoigo, Movistar, Guuk ama MásMóvil. Xaaladdan, oo leh DAZN, oo si toos ah loogu soo daray qiimaheeda qaarkood iyo kuwo kaleba, kharash ka sarreeya waa in la bixiyaa.
Tenniska wuxuu la mid yahay baaskiilka. Dabcan, waxay kuxirantahay tartanka waxaad ku yeelan doontaa hal meel ama meel kale. Saddex ka mid ah afarta Grand Slam (Roland Garros, US Open iyo Australian Open) ayaa lagu arkay Eurosport 1, oo laga heli karo hawlwadeennada sida Yoigo, MásMóvil, Gukk, Movistar, Orange, Vodafone ama Virgin Telco iyo DAZN. Dhinaceeda, Wimbledon oo ku taal Movistar, oo ah kan iibsaday xuquuqda maqalka. Laga soo bilaabo tartamada hoose sida Master 1000, 500 iyo 250, ragga waxaa lagu arkaa Movistar iyo dumarka DAZN.
Isboortiga waxaa jira kuwo badan iyo siyaabo aad ku arki karto. Hadda waa inaad doorataa isboortiga aad ugu jeceshahay oo aad ku raaxaysato xilliga xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Xagee laga daawan karaa isboortiga xilli ciyaareedkan?
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato imaatinka HBO Max ee Spain